Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa. VaRhamaphosa vanonzi vakashandisa mutemo wakadzikwa muna 2008, uyo vakawandudza mukuomesera vapoteri.
Masangano pamwe nevanhu vanorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa vari kushoropodza zvikuru mitemo mitsva yakatanga kushanda munyika iyi kutanga kwegore rino, iyo inorambidza vekunze vari muhupoteri kana kutsvaga hupoteri muSouth Africa kuti vasapinda mune zvematongerwo enyika.
Mutungamiri weSouth Africa, VaCyril Ramaphosa, vanonzi vakashandisawo zvakare mumwe mutemo wakadzikwa muna 2008, uyo wakawandudza, mukuomesera vapoteri.
Pasi pemutemo uyu zvakare, vapoteri vanonzi vanotorerwa mukana uyu kana vakashanyira muzinda wenyika yavo muSouth Africa, kana kudyidzana nevashandi vehurumende kana mapazi ehurumende dzekunyika dzavo.
Rimwe gweta rinoshanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanoti mutemo uyu une zvakawandisa zvitsva zviri kuomesera vapoteri panyaya dzekodzero dzavo.
VaMavhinga vanoti kunyange hazvo mutemo weUnited Nations unobata vapoteri wakadzikwa muna 1951 uchipa nyika nenyika simba rekudzika mutemo wekuti inobata sei vapoteri, South Africa yaifanirwawo kukoshesa raramo yevapoteri nekuvabvumidza kuti vashandire mhuri dzavo pamwe nekupindira mune zvematongerwo enyika dzavo.